Ma Fadeexadba ka taagan Askarta Jabuuti ee Soomaalia oo wax mushaar ah qaadan mudo sannad ah? – Xeernews24
Ma Fadeexadba ka taagan Askarta Jabuuti ee Soomaalia oo wax mushaar ah qaadan mudo sannad ah?
6. Oktober 2019 /in WARAR/NEWS /von admin
Ciidanka dalka Jabuuti ee ku jira howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa la sheegayaa in aysan mushaar qaadan tan iyo December sanadkii 2018kii.
Wargeyska Indian Ocean Newsletter ayaa qoray in Midowga Afrika uu bixiyay mushaarka Ciidanka Jabuuti ee ku jira AMISOM hayeeshee dowladda Jabuuti aysan ciidankeeda siinin mushaarkii ay la haayeen.
Guutada lixaad ee Ciidanka Jabuuti oo beddelay midda afaraad ee ku sugnaa Jalalaqsi ayaa la sheegayaa in tan iyo xilligaas aysan wax mushaar ah qaadan.
Midowga Yurub oo bixiya Mushaarka AMISOM ayaa lacagtaas ku wareejiyay Midowga Afrika,waxaana Askarigiiba helayaa bil kasta lacag dhan $800 oo doollaarka Mareykanka ah iyada oo Midowga Afrikana ku wareejiyay dowladda Jabuuti.
Midowga Yurub ayaa 20% dhimay mushaarka Ciidanka AMISOM sannadkii 2016kii,waxaa ay sidoo kale dowladaha ay Ciidamadaas ka socdaan ayaa waxaa ay sii jartaan 20% oo ah waxa lagu sheegay qarashaadka maamulka.
Askariga ayaa waxaa u soo hadhaaya $800 doollaar bilkasta, taas oo inta badan Askarta kale ay qaataan hayeeshee kuwa Jabuuti ka cabanayaan in aan wali la siin lacagtaas.
Wargeyska Indian Ocean Newsletter,ayaa mar badan ku caan baxay in u Jabuuti ka qoro warar aan sidda dhab ah xaqiiqdooda loo ogeyn dawalda jabuutina wax jawaab ah kama bixiso hayeeshee warar kala duwan oo laga soo xigtay askarta jabuuti ee ku sugan gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya ayaa sheegey in ay jirto dib u dhac marark qaarkood ku yimid mishaarkooga.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/10/Amisom.jpg 683 1024 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-10-06 09:39:332019-10-06 09:39:33Ma Fadeexadba ka taagan Askarta Jabuuti ee Soomaalia oo wax mushaar ah qaadan mudo sannad ah?
Warar Qubane ah oo ku saabsan Galbeedka Gobalka Sitti Degdeg: Daawo Prof Cali Khaliif Magaalada Muqdisho ka Tagi Doono dhawaan.